Fivarotana kapa: miverina izahay!
Home » Lahatsoratra farany farany » Hotels & Resorts » Fivarotana kapa: miverina izahay!
Antigua & Barbuda Breaking News • Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana Barbados • Vaovao Mafana • Grenada Breaking News • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Resorts • Tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana • Vaovao Mafana Saint Lucia • Tourism • Fifanarahana Travel | Torohevitra momba ny dia • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Misokatra indray ny Sandals Resorts rehetra, raha ny tena izy dia maro no efa misokatra miaraka amin'ny ambiny satria hisokatra tsy ho ela. Mety ny fotoana noho ny antony maro hanaovana drafitra fitsangatsanganana ho an'ny fialan-tsasatra Sandals anio. Tsy ilaina ny miandry vaovao eran'izao tontolo izao miaraka amin'ny safidy rehetra misy.
Voalohany indrindra, ny Sandals dia nitondra fahamatorana tokoa ho an'ny fahasalamana sy ny fiarovana any amin'ireo toeram-pialofana. Ankehitriny, mihoatra noho ny hatramin'izay, ny Sandals dia mandray fepetra fanampiny hiarovana ny fijanonan'ny vahiny miaraka amin'ireo Sandals Platinum Protocols of Cleanness. Ny toeram-pialan-tsasatra misokatra dia nanamafy ny paikadin'izy ireo mba hahitana ny fifandraisana rehetra isaky ny trano fandraisam-bahiny manomboka amin'ny fotoana ahatongavan'ny vahiny eo amin'ny toeram-pialofana amin'ny seranam-piaramanidina, hatramin'ny traikefa niainany. Ireto protokolà fanampiny ireto ary ny fenitra momba ny fahadiovana azo antoka dia miantoka ny fepetra fitomboan'ny fahasalamana sy fiarovana ho an'ireo vahiny mikatsaka fiadanan-tsaina any Karaiba.
Antigua: Misokatra izao
Barbados: Misokatra izao
Jamaika: Misokatra izao
Saint Lucia: Misokatra izao
Grenada: hisokatra ny 1 Oktobra
Bahamas: hisokatra ny 1 Novambra
Fa miandry, misy bebe kokoa!
Sandal dia maniry ny hahatakaran'ireo vahininy vakansy tsy misy ahiahy. Izany no mahatonga ny Sandals Resorts manasongadina fomba fanao sy politika faran'izay tsara natao hametrahana ny sainao tsy hihatsaravelatsihy. Na famandrihana efa misy na iray natao izao, dia nosaronan'ny Sandals ny vahiny.
Fanafoanana ny efitrano maimaim-poana miaraka amin'ny famerenam-bola 100%
Ny fanafoanana ny efitrano maimaim-poana dia misy ho an'ny famandrihana nofoanana 31 andro na mihoatra alohan'ny daty fisoratana anarana (ankoatry ny Over-The-Water Suites). Izany dia mihatra amin'ny faritry ny tany / efitrano famandrihana ihany. Ny fanafoanana ny sidina dia iharan'ny sazy sy fameperana ataon'ireo mpitatitra fiaramanidina.
Ny sandan'ny antoka sandal tsara indrindra dia ahafahan'ny vahiny mahatsapa fa ny tahan'ny efi-trano no vidiny tsara indrindra. Afaka mamandrika am-pitokisana an-tserasera ireo vahiny, amin'ny alàlan'ny maso ivoho iray tianao indrindra, na amin'ny fiantsoana ny 1-888-SANDALS. Raha ao anatin'ny 24 ora famandrihana vakansy an-tserasera amin'ny www.fifanent.com ny vidiny ambany noho ny daty fahatongavana, ny isan'ny alina ary ny trano hipetrahana ao amin'ny trano, Sandals dia hamerina ny fahasamihafana.
Ny famandrihana mendrika dia hanana safidy "hitazona ny efitrano" $ 49 isaky ny olona hanampy amin'ny fandaminana ny dia. Ny fisafidianana ny safidy "mitazona" dia midika fa ny carte de crédit ampiasaina amin'ny fametrahana dia hoentina 302 $ fanampiny ao anatin'ny 21 andro. Ny salanisa sisa tavela amin'ny fialantsasatra dia homena vola 45 andro mialoha ny datin'ny fisoratana anarana.
Ny vahiny dia afaka mihidy amin'ny fialan-tsasatra manaraka ataon'izy ireo miaraka amin'ny sandan'ny sandal sy mora vidy ary tsy misy drafitra fandoavam-bola. Ny vidin'ny fialan-tsasatry ny Luxury Included® Sandals dia azo aparitaka mandritra ny volana maromaro rehefa mamandrika mivantana amin'ny Sandals, miaraka amin'ireo vahiny manan-tsafidy handoa ny vola 3 ka hatramin'ny 24 volana.
Satria ny tobin'ny Sandals dia miorina amin'ny faritra maro any Karaiba, ny sasany izay namaly ny areti-mandringana manerantany (COVID-19) tamin'ny famoahana fameperana eo an-toerana ny mpitsidika na ny toeram-pialan-tsasatra, mety hisy fiatraikany amin'ny Fandaharanasa Sandals Resort Exchange. Ny programa fifanakalozana resort dia miankina amin'ny fepetra rehetra apetraky ny governemanta, anisan'izany ireo izay mametra ny fahafahan'ny vahiny mivezivezy eo anelanelan'ny trano na misy fiatraikany amin'ny fahafahan'ny Resort Sandals mamindra ny vahiny eo anelanelan'ny trano na misokatra sy miasa. Ho foana ny fandaharana raha tsy voarara na amin'ny didim-pitsaran'i Sandals dia nanjary tsy mandeha amin'ny laoniny noho ny fameperana eo an-toerana na ny areti-mandringana. Toy ny mahazatra dia hatao loha laharana hatrany ny fahasalamana sy ny fiarovana ny vahinin'ny Sandals.